Hamro Yatra | » आज खण्डग्रास सूर्यग्रहण : के गर्नु हुन्छ ? के हुदैन ? आज खण्डग्रास सूर्यग्रहण : के गर्नु हुन्छ ? के हुदैन ? – Hamro Yatra
> आज खण्डग्रास सूर्यग्रहण : के गर्नु हुन्छ ? के हुदैन ?
आज खण्डग्रास सूर्यग्रहण : के गर्नु हुन्छ ? के हुदैन ?
७ असार, काठमाडौँ । आषाढ कृष्ण औँसीका दिन आज खण्डग्रास (आधा सूर्य ढाक्ने) सूर्यग्रहण लाग्दैछ ।
नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका अनुसार ग्रहणले बिहान १०स् ५० बजे स्पर्श गर्नेछ । मध्याह्न १२स् ३८ बजे मध्य र अपराह्न २स्२३ बजे ग्रहणले मोक्ष प्राप्त गर्ने समितिका अध्यक्ष प्रा डा रामचन्द्र गौतमले जानकारी दिए । तीन घण्टा ३३ मिनेटसम्म नेपालबाट सूर्यग्रहण देखिने उनले बताए ।
शास्त्रीय मान्यताअनुसार असार ६ गते राति १०स्५० देखि बाल, वृद्ध र बिरामीबाहेक अरूलाई भोजन निषेध गरिएको छ । ग्रहणका समयमा स्नान, दान, श्राद्ध, जप, ध्यान, साधनालगायत कर्म गर्न शुभ मानिन्छ । ग्रहणका समयमा दीक्षा मन्त्र लिन पनि उत्तम हुने शास्त्रीय मान्यता छ ।
सूर्य ग्रहणमा चार प्रहर ९१२ घण्टा० र चन्द्रग्रहणमा तीन प्रहर ९नौ घण्टा० अघिदेखि सुतक लाग्ने धर्मशास्त्रविद् समेत रहेका गौतमले बताए । सुतक लागेपछि भोजन गर्नु नहुने धार्मिक विश्वास छ । यसै विश्वास अनुसार असार ६ गते राति १०स्५० बजेदेखि भोजन गर्नु हुँदैन ।
प्रदेश नं। १ बाट सन् १९६५ नोभेम्बर २३ तारिखका दिन बिहान बलय ९पुरै सूर्य ढाक्ने० सूर्यग्रहण लागेको थियो । अब बलय सूर्यग्रहण सन् २०६४ फेब्रुअरी १७ मा प्रदेश नं। १ कै दक्षिणपूर्वी भूभागबाट देखिने उहाँले सुनाउनुभयो । आजको सूर्यग्रहण विश्वका केही भागबाट पुरै ढाके पनि नेपालबाट भने आधा ढाक्ने अर्थात् खण्डग्रास मात्र देखिने छ । नेपालको कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक क्षेत्रबाट भने ९८ प्रतिशतसम्म सूर्य ढाकेको देखिने जनाइएको छ ।
काठमाडौँबाट मध्याह्न १२स्०४ बजे सूर्यलाई करीव ८८ प्रतिशत ढाकेको देखिनेछ । यसैकारण ग्रहणका समयमा वातावरणीय तापक्रम घटेर चिसो अनुभव हुनेछ । त्यसदिन दुईपटक विहान भएको पो हि कि भन्ने जस्तो महसुस हुने खगोलविद् आचार्यले बताए ।